African Storybook - Musikana akapfuma
Karekare kwaiva nevasikana vaviri vainzi Nelima na Nambuya. Vasikana ava vaiva mukoma nemunin'ina. Vabereki vavo vainge vakashaika. Vaigara mugwenga raiva risinganai mvura kana kumera zvirimwa. Munhu aida zvokudya aitofamba chinhambwe chirefu kuti awane zvokudya.
Nelima aiva musikana akanyarara, aizvirereka uye achibatsira vamwe. Umwe wake, Nambuya aiva musikana aizvikudza uye asingatsiuriki. Aiva asina basa nevamwe vanhu.
Rimwe zuva vasikana vaviri ava vaiva vasina zvokudya. Vaifanirwa kunotsvaka zvokudya. Vakapinda munzira dzakasiyana kunotsvaka zvokudya.
Mudunhu iroro maigara chembere yainzi Netasile. Chembere iyi yaizivikanwa nemasimba ekupa hupfumi. Netalisile aiva nechirwere chemaperembudzi saka aiva nemaronda muviri wose.
Nambuya akasangana naNetalisile. Netalisile akashevedza Nambuya, "Mwanangu, wakadii hako? Unobva kupi? Uyezve urikuenda kupi?"
Nambuya akadaira mibvunzo yese. Netalisile akabva ati, "Huya undibatsire kuenda kumba kwangu ndikuudze zvekuita."
Nambuya haana kupindura chembere iyi zvakanaka. Akapindura achiti, "Zvirinani ndife zvangu pane kubata maronda enyu ayo." Netalisile akanyarara hake ndokubva audza Nambuya kuti afambe zvakanaka.
Nambuya akafamba kwenguva refu. Akasvika panzvimbo yaiva nenyoka, mazongororo, makonye nezvimwe zvipukanana. Aiva aneta avanenzara. Akagara pasi kuti azorore, achibva abatwa nehope. Zvipukanana zvakatanga kumuruma.
Murwendo rwake, Nelima akasanganawo nechembere imwecheteyo. Akafara kuonaNetalisile nekuti aiva munhu wekutanga waakaona kubva paakatanga kufamba. Netalisile akamubvunza mibvunzo yaaive ambobvunza Nambuya.
Nelima akabvuma kubatsira Netalisile. "Waita zvakatadzwa nevamwe," chembere yakamuudza. Nelima akaudzwa kuti adzokere kumba. Akaudzwa kuti paanosvika kumba aizowana kuine zvese zvaaishuvira.
Nelima akafara zvikuru akatenda. Akamhanya achidzokera kumba akawana pave neimba itsva yaive yakazara zvinhu zvese zvaaishuvira nezvekudya zvakawanda. Akanga apfuma.
Asi Nelima aichema mukoma wake Nambuya. Akazviudza kuti, "Munhu asingadi kutsiurwa apedzesera ava mumukanwa menzou."
Author - Salaama Wanale
Translation - Lilian Chaminuka
Illustration - Mango Tree
Language - ChiShona
Die Meisie wat Ryk Geword het
Gapisǝmpi ŋgaɖee ga pra atanja ma
The girl who got rich
La Jeune Fille, Qui Devient Riche
Suka Debbo Diikaaɗo
Intombazanyana eyaba isicebi
Nirere na Nyiranzage
Nelima afuna buyiindifu
Apese Na Abu Tabar
Akhabere Aba Omuyiinda
A Menina Que Ficou Rica
Omwishiki Owatungire Obugaiga
Wandiya Kaŋ Te Arzaka